जय हो नेपाली फिल्म !
अखण्ड भण्डारी, काठमाण्डौ, २०७० माघ १३, सोमवार
सलमान खानलाई बलिउड बक्स अफिसका 'किङ' भनिन्छ । सलमान हुन् वा आमिर वा अरू कुनै— खानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैको सातो जान्छ । हिन्दी फिल्मको लामो राज्यपछि नेपालमा '६ एकान ६' ले केही दिन सत्ता कब्जा गर्‍यो । शासन दह्रै जमिरहेका बेला गतसाता भेटिएका निर्माता दीपकराज गिरीले पसिना पुछ्दै मसँग भनेका थिए— 'जति चले पनि के गर्नु, खानको फिल्म आउँदैछ । त्यसमा पनि सलमान खानको । आफ्नो त जति दौडिन्छ, त्यसअघि मात्र हो ।'
बलिउडसँग आत्मसमर्पण कहिले सम्म ? : राजेश घिमिरे
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० पौष २३, मंगलवार
नेपालमा फिल्मका दर्शक बढेको बढ्यै छन् । त्यस अनुपातमा फिल्म निर्माणको क्रम पनि बढिरहेका छन् । तर, बिडम्बना दर्शकलाई बाँध्न सक्ने फिल्म बन्न सकेनन् । नारायणगढस्थित ईन्द्रदेव चलचित्र मन्दिरका व्यवस्थापक बामदेव अधिकारी टिकट काटेर हल भित्र छिरेपछि उठ्नै मन नलाग्ने फिल्म बन्न नसक्नुनै हिन्दी फिल्मको हस्तक्षेप बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको ठान्छन् । उनी भन्छन्- ‘फिल्म निर्माणको बाढि आएपनि दर्शकलाई सन्तुष्टी दिनसक्ने फिल्म अत्यन्तै कम आए ।’
फिल्मकर्मीले बुझ्न नसकेको `कस्ट्युम डिजाईन` : नीलिमा शर्मा
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, २०७० पौष ९, मंगलवार
कस्ट्युम डिजाइनरको काम भनेको कसैका लागी कपडा डिजाइन गर्नु हो जसको लागी डिजाइनरले कपडा बनाउँछ, उसको रङ्ग, रुप, आकार, कपडाको चयन र कुनै अवसरलाई लिएर दिमागमा पहिले डिजाइन बनाउनु र त्यसपछि पहिराउनु हो । त्यसैगरी, स्टाइलिस्टको काम कुनै पनि कपडा चाहे त्यो रेडिमेट होस् या कुनै डिजाइनरको या त साधारण भन्दा साधारण कपडा पनि मिलाएर गरेर त्यसमा जसको लागि त्यो कपडा पाहिराइदिने हो उसैको शारीरिक बनावट, रुप, रङ्ग हेरेर उसलाई लगाइदिनु पर्नेछ । जसमा गर गहनाको सहायताले कहिले काहिं पूर्ण रुप दिने गर्दछ । तर, सम्पूर्ण चिजलाई मिसाउनु र भए भरका चिजलाई लगाउनु पनि स्टाइलिस देखिनु होइन । यी उल्लेखित सबै चीजहरुको सही संयोजन र प्रायोजन नै 'स्टाइल' हो ।
शिव रेग्मीको सम्झना : मरेर पनि जो बाँचिरहन्छन्
शिशिर चालिसे, काठमाण्डौ, २०७० पौष ६, शनिवार
एउटा फूल फूल्छ, ओईलाउँछ अनि झर्छ । वसन्तको बहार पनि गृष्म, शरद हुँदै शिशिरसम्म आइपुग्दा उजाड बनिसकेको हुन्छ । यो प्रकृतिको नियम हो यसलाई बदल्न संसारको कुनै पनि शक्तिले सक्दैन । एउटा मानिस पनि जन्मन्छ समयसँगै ठूलो हुँदै जान्छ बूढो हुन्छ अनि एक दिन मर्छ । यो प्रकृतिको नियमित प्रकृया हो चलिरहन्छ ।
नेपाली फिल्मको मनचिन्ते `झोला`
नारायण वाग्ले, काठमाण्डौ, २०७० मंसिर २०, बिहिवार
लेखक धरावासीलाई एक पाखे झोला भिरेर हिँडिरहेको भेटिन्छ । उनको ध्याउन्ना भने अरुका झोलामा के कस्ता पोका पुन्तरा छन् भन्ने खोजीनीति गर्ने हुन्छ । फिल्मको आरम्भ र अन्त्यमा उनी आफैं उपस्थित भएर इतिहासको एउटा कठोर सामाजिक पोया फोएका छन् जसले नेपाली फिल्म इतिहासकै सम्भवतः केही उत्कृष्ट दृश्यहरु दिएको छ ।
Results : 16 - 20 of 98